Saddex qof oo ku geeriyootay shil gaari oo ka dhacay meel u dhow magaalada Carmo - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandSaddex qof oo ku geeriyootay shil gaari oo ka dhacay meel u dhow magaalada Carmo
May 15, 2019 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Burburka baska oo goobta yaala. [Isha Sawirka: Facebook]
Boosaaso-(Puntland Mirror) Saddex qof ayaa ku geeriyootay kadib markii ay isku dhaceen gaari bas ah iyo booyad, sida dad goobjoogayaal ah ay u sheegeen bog wareedka Puntland Mirror.
Shilka ayaa ka dhacay wadada laaamiga meel ku dhow magaalada Carmo, sida ay goobjoogayaashu sheegeen.
Ku dhawaad 10 qof oo kale oo ku dhaawacmay shilka, ayaa loo qaaday isbitaalka Carmo.
Baska oo siday dad rakaab ah ayaa la sheegay in uu ka yimid magaalada Boosaaso kuna socday Garoowe.
Qarax lala eegtay gaari ciidan gudaha magaalada Boosaaso